Umsebenzi wethu · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Apha unokufumana isishwankathelo seeprojekthi zethu.
Ngokusekwe kumbongo we-Afro-German imbongi uMay Ayim, ungenelelo olutsha lwezobugcisa luka-Oyoun "rongin shagor" lubonisa iinkcubeko zokukhumbula ngokuphonononga imisonto ebonakalisayo kunye nemveliso yokwakheka kwenkcubeko elele kwiimvakalelo zomzimba ocinezelweyo...
Ubugcisa bezinto eziphathekayo, imidiya edibeneyo kunye nokusebenza - kule ntsimi yobugcisa bokuxinana, umzobi waseBulgaria uLora Krasteva ukumema kumboniso owenziweyo "Ukuba nguAlman", ojikelezayo malunga nesihloko sobumi.
KUFUNEKA SONKE SIPHUPHA yingqikelelo egxile kumandla okuphupha njengesenzo sokubuyisela kunye nokubhukuqa. Amatshantliziyo uSonya Lindfors noMaryan Abdulkarim bamema abathathi-nxaxheba ukuba bachithe ixesha kunye, baphulaphule kwaye baphuphe kunye.
OoVimba abaFugitive baphonononga imibuzo malunga neendaba ezizezinye kunye nee-ontologies zoovimba abangaziwayo abacela umngeni kumabali aphambili e-BiPOC yamabali angaqhelekanga.
Nge-ESCAPISM, i-Oyoun yavula iqonga lovavanyo lobugcisa kunye nentlalontle, ukudibanisa indawo ebonakalayo kunye neyomzimba ngokusebenzisa idijithali kunye nokufunda okuchaphazelekayo.
Simeme abagcini bethu * ukuba benze umsebenzi weqela kunye, ukuqala kwingcinga enesibindi yokuba kukho iindawo eziqhelekileyo, ezigqagqanayo ezinomdla ezinokuthatha ifomu entsha xa kusetyenzwa ngokudibeneyo kunokuba kwenziwe ngabantu.
Abagcini, amagcisa kunye nabasebenzi bezenkcubeko basukuzana nesazisi, izinto zabo kunye neenkumbulo eziqulethwe zimbono ye-diasporic, ye-decolonial kunye ne-queer. Uphando, ugcino, umboniso kunye neprojekthi yokusebenza ebandakanya ngaphezulu kwabantu abangama-40.
ingcinga yetekhnoloji yobugcisa
a'21 Techno Utopia x I-Post-Digital Ukungazi
Umnyhadala weenyanga ezimbini udibanisa ngaphezulu kwama-60 amagcisa kunye namatshantliziyo avela eMantla naseNtshona yeAfrika, eNtshona Asia naseJamani kwindawo ezinabelweyo, ezinxibelelanayo nezisebenza ngokubambisana kakhulu kumbandela wokungazi emva kwedijithali.
"Kuthetha ntoni ukuzikhathalela kuwe?"
"Ithetha ntoni inkathalo yakho kuwe?" - sibuze amagcisa kunye nabezenkcubeko kwiOyoun Curators * Lab - kwaye ke ngaloo ndlela sazisa iLockdown Residency ebomini.
I-liturgy yobugcisa kunye nendawo, uhambo olunzulu noluchasene noqeqesho ngokufudukela kwelinye ilizwe, kubandakanya nokusebenza kweBukhurr kunye neChikhat ngabantu abadlulayo, abezomeleleyo nabangengabo ababhinqileyo abenza amasiko emveli kwaye babalisa amabali abo kule nkqubo.